Onye na-ahụ maka njem nleta: Spain ga-ewebata ntinye akwụkwọ Paspọtụ COVID site n'oge ọkọchị
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » Onye na-ahụ maka njem nleta: Spain ga-ewebata ntinye akwụkwọ Paspọtụ COVID site n'oge ọkọchị
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Onye minista na -ahụ maka njem na Spain Reyes Maroto
Ọ ka na-esikwa ike ịkọwa kpọmkwem ụbọchị mgbe paspọtụ ga-apụta
Spain iji kpughee akwụkwọ ntinye ọhụụ maka ndị ọbịa si mba ọzọ
Tupu imejuputa atumatu 'COVID Passport', opekata mpe pasent 70 nke ndị Spen kwesịrị ịgba ọgwụ mgbochi
COVID Paspọtụ ga-adị mkpa ịbanye Spain
SpainMịnịsta na-ahụ maka njem nleta na njem nlegharị anya Reyes Maroto kwuru na a ga-ewebata NJ ọgwụ mgbochi, nke 'Green Asambodo' ma ọ bụ 'COVID Paspọtụ', nke ga-eme ka ndị njem si mba ọzọ banye mba ahụ.
Tupu imejuputa atumatu 'COVID Passport', opekata mpe pasent 70 nke ndị Spen kwesịrị ịgba ọgwụ mgbochi. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ a nwere ike belata na 30-40 pasent, ọ bụ ezie na ndị dọkịta jụrụ nke a. Oge ịgba ọgwụ mgbochi mba na-adabere na ịnye ọgwụ ogwu AstraZeneca na mba ahụ, ya mere, ọ ka siri ike ịkọwa kpọmkwem ụbọchị mgbe paspọtụ ga-apụta.
Ndị ọchịchị gọọmentị nke Balearic kwere nkwa ịbụ ndị mbụ ga-anwale atụmatụ ịnwale ụgbọelu na mpaghara ha, mana Maroto jụrụ onyinye ahụ. Ọ chọrọ ka e webata akwụkwọ ikike ngafe na mba niile n’otu oge.